Maqnaan-la'aanta ah ee isticmaalka dhowr mitir oo kaararka waraaqaha ah ayaa ii riixay inaan soo saaro codsi mobile ah oo haboon ujeedadaas.
Waxay ahayd lagama maarmaan in la go'aamiyo hawlaha muhiimka ah si loo gaaro natiijada ugu badan. Sidaa darteed, ka hor inta aan la bilaabin horumarinta arjiga, waxaan soo ururiyay liis dhamaystiran oo ah hawlaha iyo qalabka loo baahan yahay:
Awood u leh in la abuuro oo lagu kaydiyo tiro aan xad lahayn oo kaararka ah
Aruurinta kaydinta iyo falanqaynta mugga qalabka wax bartay
Awood u lahaanshaha inaad ka soo dejiso xogta dukumiintiga qoraalka ah ee shaqeynta kartida si loo abuuro kaararka si aad u sameyso waxyaabahaaga waxbarasho
Qodobbada tooska ah ee kaadhadhka oo dhan ee amarka la rabo, oo leh qiyaasta ku-celceliska ee la isku-hagaajin karo iyo hawlaha la adeegsanayo cod-bixiyaha maqalka si loo dhageysto walxaha la baaray wakhti kasta
Abuurista xog ururin munaasab ah oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee nolosha
Abuurista qalabka flashcards ee sawirada si loo abuuro ururo leh muuqaal
Hawlgalka la'aantiis internetka iyo qaabka diyaaradda
Ku keydinta xayeysiinta dhammaan ereyada adag ee la xariira
Leylisyo maalinle ah oo la aqbali karo oo loogu talagalay xasuusinta erayada
Ogeysiinta jimicsiyada qorsheysan
Ereyga kala-soocidda kala duwan
Kaararka kaadhadhka loo wareejiyo
Awoodda inaad barato luuqadaha shisheeye iyo dhowr luqadood oo siman
Ka dib markii ay go'aamiyeen hadafyada, waxaan bilaabay inaan si firfircoon u abuuro wax cusub.
Iyada oo haysata waayo-aragnimo yar oo horumarinta codsiyada nidaamka hawlgalka Android, waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo qaybta koowaad ee LingoCard ee casriga ah iyo dhowr bilood oo ah codsigii ugu horreeyay ee moobiilka ee leh kaararka luqadda iyo hal dukumiinti (hal buug oo kaarar ah) ayaa diyaar ah. Si loo horumariyo qalabyo badan oo adag, waxaan bilaabay inaan ka wada xaajoodo xulashooyinka fulinta oo leh xirfadleeyaal xirfadley ah oo aan ogaaday Dadku waxay jecelyihiin fikradayda, maaddaama ay dhiirigeliyayaashu bilaabeen inay ku biiraan mashruuca. Kadib fulinta fikradaheena, waxaan go'aansanay inaanan joojin oo aan horumarinno dhowr qalab oo u gaar ah laba nidaam oo kala duwan: Android iyo macruufka. Waxaan ku soo bandhigay barnaamijkayaga Google Play iyo Apple Store lacag la'aan.
Markaad ku qanacdo jawiga luqadda, waxaa jira fahan macquul ah baahida loo qabo in si deg deg ah loo soo koobo jumlado. Waa fahamka jumladaha iyo odhaahaha aasaasiga ah ee ka dhigaya hadalkaaga mid la aqbali karo wada sheekeysiga iyo turjumid degdeg ah. Sidaa darteed, waxaa la go'aamiyay in la isku daro kaararka jumlada, weedhaha iyo qaylada. Hadda, codsigeena waxaad ka heli kartaa boqolaal kun oo kaararka luqadda leh farabadan erayada iyo weedho kala duwan.
Liiska noocyada kaararka, halkaas oo aad ka arki kartid dhammaan kaararka isla markiiba geli diiwaanka kor u kaca. Kaadh kasta wuxuu si toos ah uga leexan karaa liiska adigoo ku xiraya badhanka foorarka.
Habka kaadhka furan. Halkaan waxaad ku furi kartaa kaadhka si aad u aragto nuxur qoraaleed oo aad u kala dhufan kartid dhamaan kaadhadhka bidixda / midigta. Habkani, waxa kale oo suurtagal ah in lagu diyaariyo kaararka, u diro xog ururin firfircoon oo waxbartay. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu soo lifaaqo sawirrada iyo sawirrada flashcard si loo abuuro "muuqaal muuqaal ah". Kaadh kasta waxa loo geliyaa dhinaca kale adigoo si fudud u xoqaya meel kasta oo ka mid ah qoraalka.
Ka shaqaynta dhibaatada waqtiga la'aanta waxbarashada, waxaan go'aansanay inaan abuurno ciyaaryahan codad gaar ah leh oo ku dhajin doona qoraal kasta iyo kaar kasta oo loo sameeyay qaab kasta, beddelidda erayada ajnabiga ah iyo tarjumadooda. Sidaa darteed, luuqad shisheeye ayaa loo baran karaa si la mid ah dhageysiga muusikada meel kasta iyo waqti kasta. Hadda qalabkan waxaa lagu hirgeliyaa suurtagalnimada in la dhegaysto ilaa 40-50 luqadood oo ajnabi ah, iyada oo ku xidhan qalabka iyo moobilka loo isticmaalo. Waxaan aaminsanahay in muddo yar ka dib uu ciyaaryahankeena la shaqeyn doono dhamaan luqadaha la yaqaan ee adduunka.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xusuusto ereyada, tusaale ahaan, sida xarfaha loo yaqaan 'alphabetype', oo ku qoran habka loo yaqaan 'alphabetype', 'random', mawduucyada, iwm.
Waa hirgelinta sahlan ee mabda'a ah ee ku-soo noqnoqonta, halkaas oo kaararka dib loo eegayo marka la kordhiyo waqtiga.
Waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho nidaamka Leitner codsigeena. Flashcards ayaa loo wareejin karaa kooxo dhowr ah. Tusaale ahaan, waxaad ku dhejin kartaa walxaha tababarka ama codsashada oo keliya si aad u doorato luuqad diyaar ah, ka dib markaad u gudubto kaararka, waxaad u wareejin kartaa xogta "daraasadda", oo ka tagta gundhiga haddii aadan isla markiiba xusuusto, ama u wareejinta ereyada ugu adag ee xogta firfircoon. Ka dib markaad horey u barato xogta firfircoon, ka dibna la doorto iyo waqti ka waqti, dib u habee alaabta la bartay ee database-ka la baray.
Si loo gaaro hadafyadan, waxaanu horumarineynaa barnaamijyadeena gaarka ah ee la barbar dhigi karo si loo abuuro xiriirro cusub oo dhexdhexaad ah maskaxda - waa inaad soo qaadataa wax sax ah oo aad ku dadaaleyso sidii aad u gaari lahayd natiijada ugu fiican.